Raad Raac News Online – Dowladda Puntland oo Daah-furtay Tiro-koobka Shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Puntland (sawiro)
Si rasmi ah ayay dowladda Puntland u Daahfurtay maanta Tiro koob rasmi ah oo lagu sameyn doono Shaqaalaha rayidka ah ee dawladda, waxaana kulan ay ka qeybgaleen Madax kasocota Madaxtooyada, Wasaaradda Sh/Shaqaalaha, Guddigu Dibu habeynta Shaqaalaha & Bangiga Aduunka ayaa ka dhacay Garoowe.
Madaxda dowladda Puntland ayaa ka sheegay madashan in ay talaabadan tahay mid bogaadin mudan, oo la tiro koobi doono Shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Puntland, ayna heli doonan Xaquuqahooda.
Mr, Shabac wuxuu sheegay in si cadaalad ah loo gali doono tiro koobkan, isagoo mar kale hoosta ka xariiqey in ay dowladda Puntland, gaar ahaana guddigoodu ku shaqeynayaan nidaam hufan oo la hubiyey.
Hanti Dhowraha guud ee dowladda Puntland Jaamac Maxamed Cismaan oo ahaa Shaqsigii lagu bilaabay tiro-koobka ayaa bogaadiyey talaabada ay iska kaashanayaan Bangiga Aduunka & Guddigu Dibu habeynta Shaqaalaha dowladda.
Wasiirka Shaqada & Shaqaalaha ee dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sh Axmed Cabdulle ayaa ka sheegay kulankan in dhamaan kooxaha ka socda Guddiga Dibu habeynta Shaqaalaha dawladdu ay tagi doonaan dhamaan degmooyinka dalka ee ay joogaan shaqaale, isla markaasna ay soo tiro koobi doonan.